Amaxesha ali-9 KUFUMANEKA UNAYA Uqinisekisile ukuba uyiNkosazana kaMelanin yokwenene
U-YVONNE NELSON Uyakhanya njengoko Bethetha Ngentombi yakhe, Umama noMgxeki Wakhe
NUmlingisi we-ollywood, Beverly Ifunaya Bassey eyaziwa njenge Beverly Naya ayihlekisi xa kufikwa kumba wokumangalisa kumatheko asekuhlaleni. Ube nokuzinza ngokuzinzileyo iinjongo ze-melanin ngobuso bakhe obuhle kunye nobuso obuhlukileyo ukususela oko wavela enkundleni.
Ubuhle obukhaphukhaphu bubile bubonakele eendaba kwimifanekiso ebomvu izihlandlo ezimbalwa ngekwenziwe kwakhe okumangalisayo kunye nokubonakala kweenwele kwaye akabonisi luphawu lokucothisa nangaliphi na ixesha kungekudala.
I-Thespian yaseBrithani yokuzalwa ihlala ikhangeleka imangalisa njengoko iqinisekisa ukugxininisa kunye nokudibanisa amanqaku akhe anamandla. Uhlala ejongise ngaphandle kwe-chic sultry makeup ebandakanya ukucacisa okucocekileyo okucocekileyo, ukugqiba kweliso elinomsi, imivalo etyheli kunye nemilebe emenyezelayo okanye emile mathe, kwaye amehlo akhe aqhelekileyo endalo awanakujongwa.
UBeverly akanazintloni zemibala njengoko edlala ejikeleza nezihambelana neempawu kunye nethoni yakhe yolusu. Ubebethelela imilo yakhe ijongeka igqibelele kangangokuba uqinisekisile ukuba uyindlovukazi yokwazana noMelinin.
Nazi iifoto zikaBeverly Naya zokuthatha indawo ...
Ifoto yetyala: I-Instagram | Thebeverlynaya
Beverly Naya I-beverly naya yeenwele beverly naya instagram I-Beverly Naya izimonyo ulunge iinwele zendalo ukwakheka kwamehlo Okufumaneka iinto zokuzilungisa Imilebe yomlomo IMelanin UMelanin uKumkanikazi Iinwele zendalo iinwele zendalo
Ulonwabo Udo Aprili 20, 2018
I-Mixtress yeSophistified! I-Blogger CHARLIE KAMALE Ihlala Queening Ngelixa Inxibayo Ukuthuthuzela